Home » Lahatsoratra farany farany » Birao fizahantany afrikanina » Hafatry ny mpiasa ao amin'ny birao fizahantany afrikanina
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • People • fanorenana • Seychelles Madagascar Malgache • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fifanarahana Travel | Torohevitra momba ny dia • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Tsy noforonina mitovy izao tontolo izao. Hita bebe kokoa izany any Afrika amin'ny ankamaroan'ny faritra eto amin'izao tontolo izao. Ny filohan'ny birao afrikana misahana ny fizahan-tany Alain St. Ange dia misaintsaina an'io zava-misy io ary miantso ny mpiray antoka hahita ny zava-misy izy ireo.
Ny filohan'ny komity fizahan-tany afrikanina, Alain St.Ange, monina any Seychelle, dia namoaka fanambarana ho an'ny 1 mey, andron'ny asa.
Tsapan'i St.Ange ny fiantraikan'ny COVID-19 amin'ny toe-javatra iasana any Afrika.
Ny fotoana hanelingelenana ny zava-misy eny an-kianja dia ho hita ho fanompana ireo rehetra mijaly amin'ny areti-mandringana atsy ho atsy.
Andro fiasana 2021 dia tokony ho fotoana hisaintsainana lalina. Fantatsika fa i Afrika, sy izao tontolo izao amin'ny ankapobeny, dia manohy manimba ny vokatry ny COVID-19 izay niafara tamin'ny famoizana asa mafy. Ny tsy fahafahan'ny fianakaviana mahita asa amin'izao fotoanan'ny COVID izao dia tsy maintsy mijanona ho lohalaharana amin'ny eritreritsika.
Ny Andron'ny Mpiasa Iraisampirenena dia tsy maintsy asongadin'ity taona ity amin'ny alàlan'ny taratry ny krizy ara-pahasalamana atrehin'izao tontolo izao sy ny fahasahiranana tsapan'ireo tena marefo.
Ny COVID-19 dia tsy mandeha mankaiza, ary ny fanatanterahana fomba fanalefahana hanairana ny tontolon'ny asa fandraharahana sy ny fanitarana harato fiarovana hitazomana ireo izay mila fanampiana dia tsy maintsy atao lohalaharana.
Ny fotoana hanelingelenana ny zava-misy eny an-kianja dia ho hita ho fanompana an'ireo rehetra tratry ny areti-mandringana.
Filohan'ny Biraon'ny fizahantany afrikanina Alain St.Ange
The Birao fizahantany afrikanina dia manolo-tena hiasa ho an'ny firenena 54 izay manao an'i Afrika ho kaontinanta lehibe misy azy. Hiara-mahita ny hazavana amin'ny faran'ny lalantsara COVID-19 maizina isika.
Tsarà fetin'ny asa 2021